Rubric: makombiyuta uye internet
Power Bank - chii icho? Hyper simba bhanga
Basa rinoshanda nemidziyo inokurumidza kubvisa bhatiri. Vanhu vazhinji vakamhanyisa mumabhatiri "akafa" panguva isingaenderane zvikuru. Nehurombo, hakuwanzo kuwanikwa mukana wekubvisa magetsi kana charger. Sei zvakadaro ...
Dzimwe nguva muridzi wekombuta yemunhu anotarisana nerimwe basa rakaoma mune zvaro - kushandura runyorwa rwakanyorwa nemaoko mune dhijitari. Ehe, iwe unogona kuita iri basa man'a. Nekudaro, nzira iyi yakakodzera ...
Minecraft: mapfumo. Maitiro ekuchera bakatwa muMinecraft
Paunotanga kuoneka munyika yeMececraft, hauna chaicho. Iwe uchafanirwa kuwana yako yekutanga zviwanikwa nemaoko asina chinhu uye nerubatsiro rwavo kugadzira zvishandiso zvako zvekutanga izvo ...
Isu tinotamba nekuda kwemhedzisiro, kana Sei kudzima zvinodiwa muSims-3?
Vanhu vanodei? Mubvunzo uyu unogona kupindurwa nenzira dzakasiyana, asi chero mhinduro icharamba isina kukwana. Nekuda kwekuti tese takasiyana? Kwete, nekuti zvinowanzoitika zvinangwa zvepasirese ... Ndizvozvo ...
Wese munhu anoziva nezveiyo yekushambadzira chikuva seAliexpress anogona kusevha imwe mari pakutenga. Kune akawanda zvigadzirwa pane ino saiti yeChinese, mitengo yatove yakadzikira zvakanyanya pamitengo yemusika. Vazhinji vakagara ...
Iyo Witcher 3: kufamba-famba. "Pfuma yeCount Royven," nyaya yekutsvaga
"Witcher 3" mutambo-unotamba mutambo wakashamisa munhu wese. Ehe, chikamu chekutanga neyechipiri chepurojekiti chaive chatove chiri mhizha.
Vamwe vashandisi vefoni, kufungidzira mukati mezvirongwa, vanosangana neshoko risinganzwisisike TTY kana chirevo "Teletype maitiro." Zvakare mune iyo mamiriro bar yeiyo smartphone inogona kunge iri yechiratidzo icon. Chii chinonzi teletype mufoni? Nei ...
Maitiro ekuisa Google Chrome pakombuta. Mirayiridzo yevanotanga
Unogona kushamisika, asi nhasi havazi vese vashandisi vanoziva kuisa Google Chrome pakombuta, uye izvi kunyangwe chokwadi chekuti browser iri rave riri mutungamiri asina mhosva pakati ...
Crysis Iri izwi rakanyanya kudarika kungova izita reanopfura. Uyu mutambo unogara uchigamuchira zita rekuremekedza mukudanwa "Best Graphics". Chikamu chimwe nechimwe chitsva chinogadzika chinotevera bhaidhi, icho munhu wese anotungamirwa na ...
Ndeipi iri nani - PS3 kana Xbox 360? Kutsvaga mhinduro
Zvakanaka, isu takazopedzisira tachengeta imwe mari uye takagadzirira kuzadzisa chiroto chedu chekare uye kutenga yakanaka mutambo koni! Isu tinoshuvira kunyudza mune inonakidza uye inonakidza nyika yemitambo uye tipe kune iyo ...
Isita zai mumutambo - chii icho? Mazai eIsita ane Outlast, Minecraft uye GTA-5 mitambo
"Isita Egg" ndiro zita rakatsanangurwa re "Isita Mazai" mumitambo, mafirimu, uye software. Iyo irwo rudzi rwechakavanzika, zvirimo izvo zvisingapindirane mune zvese zvirimo, zvinotaridzika zvisina kujeka, zvinosekwa uye kazhinji kazhinji ...
Mamwe makanzuru eWarcraft 3: Chando Chakatsemuka chakatanga kuoneka kapashure pekusunungurwa kwemutambo wepakutanga. Kunyangwe mushure memakore gumi, ivo vanoramba vakakurumbira. Campaign inogadzirwa nevose mafani nemakambani emitambo .. ...
Maitiro ekurambidza munhu mu "Kuita"
Nhasi tiri kutaura newe nezve nzira yekurambidza munhu mu "Kuonana". Uye zvakare, ngatiedzei kufunga nemi kuti chii chinotipa basa iri. Izvo hazvingave zvisina musoro kubata kutarisisa ...
"Logos yeUSSR" - iyo mitemo yemutambo
Kana iwe uri muridzi wefoni nhare inomhanya iyo OS OS, ipapo iwe unofanirwa kuve wakanyora zvakanyanya kusiyanisa mashandisirwo, kusanganisira mitambo, kanopfuura kamwe. Nhasi takusarudza ...
Paunobvunza nezvezita rechirongwa chekugadzira mharidzo, vanhu vazhinji pasina mubvunzo vanobatana neiyo yakakurumbira PowerPoint chirongwa kubva kuMicrosoft Corporation. Yakagadzirirwa kugadzira zvishandiso zvakasiyana ...
Mibvunzo ye22 mu database yakagadzirwa mu 0,392 masekondi.